Etu esi ere ngwaahịa na shopify ịga nke ọma | ECommerce ozi ọma
Otu esi ere ngwaahịa na Shopify n'ụzọ gara nke ọma
ECommerce ozi ọma | | CMS na Teknụzụ
.Nnɛ ịzụrụ n'ịntanetị aghọwo usoro ịzụta kachasị eji eme ihe. Ahịa n'ụzọ dị otú a arịgoro ma ebe ọ bụ na anyị gafere mkpọrọ n'ihi ọrịa Covid-19, ọbụnadị karịa.
Enweghị ike ịhapụ ụlọ, egwu nke ibute ọrịa na mgbochi ha gbara anyị ume ka anyị jiri ịre ahịa dị n'ịntanetị.
Ihe kpatara ya di mfe. Zụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị mfe, adaba na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ọ baghị uru oge ịchọrọ ịzụrụ ma ọ bụ oge, ebe ọ bụ na e-azụmahịa dịnụ awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. Naanị otu ịpị aka anyị nwere ihe anyị chọrọ n'ọnụ ụzọ anyị n'ihe erughị awa 48.
Have nwere obere azụmaahịa ma ị na-eche maka imeghe ụlọ ahịa gị n'ịntanetị? Nọgidenụ na-agụ n'ihi na a post anyị na-akọwa ihe niile mkpa ka ị mara na-enwe ike na-ere gị ngwaahịa na ụlọ ahịa.
1 Gịnị bụ shopify?
2 Kedu ka Shopify si arụ ọrụ?
3 Uru nke Shopify
Gịnị bụ shopify?
Iji mee ka ebe nchekwa gị dị ọhụrụ, anyị ga-echetara gị ihe ịzụ ahịa bụ na ihe mejupụtara ya. Zụọ ahịa bụ CMS maka azụmahịa e-commerce nke na-enye gị ohere ịmepụta ụlọ ahịa ịntanetị gị ka ọ masị gị na-enweghị mkpa maka mmemme mmemme.
Ọ dị nnọọ mfe, na-agbanwe agbanwe na usoro ụlọ ahịa ụlọ ahịa na-enweghị nghọta na ịrụ ọrụ nke ọma. N’ime nkeji ole na ole ị ga-enwe ụlọ ahịa gị dị n’ onlinentanet n’egbughị ezigbo oge. Shopify bụ otu n'ime CMS kachasị mfe n'ahịa.
Na mgbakwunye, ọ bụ nke ọhụrụ na nyiwe e-commerce ma nwee ọganiihu n'etiti nchịkwa azụmahịa, ebe ọ bụ na na-akwado ihe karịrị otu nde ụlọ ọrụ na mba 175.
Ihe ikpo okwu a bu ụlọ ọrụ jiri ha jikwaa weebụsaịtị ha e-commerce, ahia, ahia na oru ndi ozo.
Kedu ka Shopify si arụ ọrụ?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite e-azụmahịa gị site na shopify, ị ga-ahọrọrịrị ụlọ ahịa kwesịrị ekwesị dịka mkpa gị. Have nwere atụmatụ ịzụ ahịa atọ:
Nhazi Zụta: bụ atụmatụ kachasị mfe iji mepụta ngwaahịa na edemede na-akparaghị ókè na akaụntụ ndị ọrụ abụọ. Ọ na-efu ihe ruru euro 26 kwa ọnwa.
Zụpụta atụmatụ: ị nwere ike ịnweta akaụntụ 5 ma nwee ikike ịmepụta akụkọ arụmọrụ. Ọ na-efu ihe ruru euro 72 kwa ọnwa.
Advanced Shopify: Atụmatụ a dị mma maka nnukwu azụmaahịa, nke ọ ga-ekwe omume ka ndị ọrụ 15 nwee ike ịnweta ogwe njikwa. Ọ na-efu ihe ruru euro 273 kwa ọnwa.
Uru nke Shopify
Nwere akaụntụ shopify na-enye ọtụtụ uru na anyị ji ohere ịgwa gị n'okpuru:
Ihe okike ya na njikwa ya dị mfe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite ire nke nta nke nta, nke a bụ ezigbo ikpo okwu. Nwere ike ịmepụta, hazie ma chepụta blog nke gị iji kwalite ụlọ ahịa gị.
Na shopify ị nwere uru nke itinye Bochum, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ọsọ ị na-ebu n'ahịa gị.
Uru ọzọ nke ikpo okwu a bụ na ị ga-enwe ezigbo ọrụ ndị ahịa site na mkparịta ụka, nkata ma ọ bụ email.
I nwere uru inwe ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa gị (shopify nke elu ịkwụ ụgwọ) na-eduzi gị ahịa azum.
Shopify nwere ihe karịrị 70 ego ịkwụ ụgwọ mba ụwa nke na-enye ndị ahịa gị ohere ịnweta ọtụtụ akụrụngwa n'oge ịkwụ ụgwọ.
Yabụ ịgaghị ichegbu onwe gị gbasara esemokwu ụtụ isi, ịzụ ahịa na-akpaghị aka na-elekọta ala ụtụ isi nke obodo gị.
Will ga-ama ahịa niile, ebe ọ bụ na shopify na-anabata ma jikwaa iwu na sekọnd ma na-enye gị ohere ịmata ozugbo site na nkwupụta ekwentị ma ọ bụ ozi ịntanetị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ bụ dị mfe na ngwa ngwa iji mepụta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na shopify. Enwere ọtụtụ elele nke ikpo okwu a na-enye iji nwee ike ree ngwaahịa gị n'ịntanetị.
N’agbanyeghi shopify abịala na nso nso a na mba anyị, enweela njem dị ukwuu na United States na ụwa Anglo-Saxon. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ikpo okwu nke bịara ịnọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Otu esi ere ngwaahịa na Shopify n'ụzọ gara nke ọma
SEO na ibe